नेकपामा आधा दर्जन नेता अर्थमन्त्रीको रेसमा : कसको सम्भावना कति ? | Samajik Khabar
Home मुख्य नेकपामा आधा दर्जन नेता अर्थमन्त्रीको रेसमा : कसको सम्भावना कति ?
नेकपामा आधा दर्जन नेता अर्थमन्त्रीको रेसमा : कसको सम्भावना कति ?
काठमाडौं : सत्ता रुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक विवाद करिब विसर्जन भएको छ । नेकपमा यतिबेला शक्ति सन्तुलन (पावर सेरिङ) चलिरहेको छ ।
यही क्रममा गत प्रतिनिधि निर्वाचनमा पराजित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा पठाउन नेकपाले निर्णय गरिसक्यो । यद्यपि मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न बाँकी छ ।
नेकपाले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयसँगै डा युवराज खतिवडालाई भदौ १९ गते अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु परेको छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै काँधमा छ ।
यता नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने समझदारी गरेपछि आंकाक्षीहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् ।
सबै भन्दा पेचिलो विषय भने अर्थ मन्त्री को बन्छ भन्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा करिब आधा दर्जन नेता छन् । तर यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीमै भर पर्छ ।
यतिबेला नेकपाका एकथरी नेताहरुका अनुसार ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफैंसँग राखेर डा. खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरि मन्त्रालय चलाउन सक्ने सम्भावना प्रवल छ । तर नेकपामा अर्थ मन्त्रालय चलाउन सक्ने अर्थराजनीतिक व्यक्तित्व नभएको संदेश जाने भएकाले पनि त्यस्तो सम्भव छैन भन्नेहरु पनि छन् ।
त्यसो त डा. खतिवडालाई पुनः ६ माहिनाका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने आंकलन पनि छ । अर्का तिर बामदेव गौतमलाई फकाएर मनाउने र डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा लगेर पुनः अर्थमन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको दावी गर्नेहरुको पनि कमी छैन । तर लामो समयदेखि भावी अर्थमन्त्रीका रुपमा सुरेन्द्र पाण्डेकोको नाम चर्चामा छ ।
सुरेन्द्र पाण्डे नेकपामा मुलतः झलनाथ खनाल निकट मानिन्छन् र पछिल्लो समय माधव नेपालसँग देखिन्छन् । पार्टी लाइनभन्दा बाहिर निस्किए पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेलाई पुनः सोही मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ ।
पाण्डेले पनि आफु गुट भन्दा माथि उठेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश बालुवाटार पठाईसकेका छन् । तर पनि ओलीभित्रको एउटा समूहले पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन नहुने ब्रिफिङ ओली सामू पुर्याउँदै आएको छ । उक्त समूहले प्रधानमन्त्रीलाई कहिकतै क्रस गर्न नसक्ने मान्छेलाइ्र्र अर्थमन्त्री बनाउन ओलीलाई दबाब दिइरहेको छ । त्यसका लागि पार्टी महाचिव विष्णु पौडेललाई विकल्पमा राखिएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले अर्थमन्त्री पाउने विश्वास गरेका छन् । उनले ओली र प्रचण्डसँग औपचारिक प्रस्ताव नै राखिसकेको श्रोत बताउँछ । तर विवादित पात्र, पार्टीको जिम्मेवारी तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनलाई अर्थमन्त्री ओलीलाई चुनौति छ ।
त्यसो त डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने षडयन्त्र पौडेलले नै तयार पारेको भन्ने सन्देश केपी ओलीको कानमा पुगेकै छ । यता बामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेपछि उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्ने चाहना प्रकट गरिसकेका छन् ।
गौतमलाई नै बल पुग्ने गरि प्रचण्डका विश्वास पात्र जनार्दन शर्माले पनि उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेका छन् । तर संबिधानको व्यवस्थालाई देखाएर गौतमलाई मन्त्री बन्न नदिने योजनामा लागेको ओली पक्ष अर्थ मन्त्रालय गौतमलाई सुम्पिने मुडमा छैन ।
यस्तो परिदृष्य खडा भए वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रालको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदिप ज्ञवाली अर्थमन्त्रालय जिम्मा लगाउने ओलीको अन्तिम विकल्प बन्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विषेश पात्रलाई जिम्मा लगाउन चाहिकाले अन्य उपाय नलागे ज्ञवालीलाई अर्थमन्त्री बनाउने सम्भवना छ बलियो रहेको स्रोतले बतायो ।
Previous articleपाँच उद्योगकाे ह्याण्ड स्यानिटाइजरमा स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर गर्ने विषाक्त रसायन भेटियो
Next articleएमसीसीबारे भन्दै नभनेको कुराको प्रचार भयो : भीम रावल